Fedora Installation လမ်းညွှန် 18 အဆင့်ဆင့်။ Linux မှ
Fedora 18 အဆင့်ဆင့် installation လမ်းညွှန်
ဤတစ်ကြိမ်တွင်သင့်အားလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးပါသည် တပ်ဆင် လတ်ဆတ်သောထဲက Fedora 18, ကကမကထဖြန့်ဖြူး ဦးထုပ်နီ မည်သူမဆိုလစျြလြူရှုမည်မဟုတ်။
Fedora 18 ကိုမထည့်သွင်းမီအောက်ပါအဆင့် ၃ ဆင့်ကိုလိုက်နာရပါမည်။
ဒေါင်းလုပ် Fedora ISO ပုံရိပ်။ Fedora စာမျက်နှာတွင်သင်ရွေးချယ်မည့်ဗိသုကာနှင့် desktop ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဤအရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်မသိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုလိုပါသည် ဖြန့်ဝေအပေါ်လမ်းညွှန်တစ်မိတ်ဆက်စကားသည်။
ISO image ကို CD / DVD တစ်ခုသို့ကူးထည့်ပါ နေအိမ်.
BIOS ကိုပြုပြင်ပါ ဒါကြောင့် CD / DVD ကနေဒါမှမဟုတ် pendrive ကနေ boot လုပ်ဖို့၊ အရင်အဆင့်မှာသင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း။
Bootloader ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ပါ Fedora 18 ကိုစတင်ပါ။ စနစ်စတင်ပြီးနောက်၊ လော့အင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ Live System အသုံးပြုသူ.
login ပြီးတာနဲ့ icon ကိုနှိပ်ပါ Hard Drive ထဲသို့ Install လုပ်ပါ:
installation wizard ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးရွေးချယ်ရမည့်အချက်မှာ installation ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ပါ စပိန်.
အောက်ပါမျက်နှာပြင်တွင်သင် hard disk ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်၊ ကီးဘုတ်နှင့်အခန်းကန့်ခွဲခြားခြင်းအစီအစဉ်ကို configure လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ဤရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုသာနှိပ်ပါ။ Disk ၏အခန်းကန့်ခွဲခြားခြင်းမှအပ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလိုလိုသိသည်။
၎င်းသည်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါနည်းလမ်း (၂) ခုရှိသည်။
သင်တပ်ဆင်လိုသည့် hard drive ပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဆက်လုပ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုစာဝှက်လိုပါက၊ ပိုမိုလုံခြုံသောလုံခြုံမှုရရှိရန်ထို option ကိုရွေးချယ်ပါ ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုစာဝှက်ပါ။ ရရှိလာသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတရားမျှတမှုမရှိသောကြောင့်ဤရွေးစရာကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်ချက်အတွက်သာအကြံပြုသည်။
disk အခန်းကန့် wizard စတင်ပါလိမ့်မည်။
ဤအချက်မှာရွေးစရာ ၂ ခုရှိသည်။
က) operating system အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီး install လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် - အရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးအထက်တွင်ထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ခေါင်းကိုအပူပေးရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသည်။ Fedora 18 installation wizard အသစ်တွင်ဤရွေးစရာကိုခေါ်သည် နေရာတောင်းခံပါ.
ဤအဆင့်တွင်လိုက်နာရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သင်ဖျက်လိုသောအခန်းကန့်များကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည် delete ပြီးတော့ နေရာတောင်းခံပါ.
ခ) disk ကိုလက်ဖြင့်ခွဲခြမ်း။ ဤအဆင့်သည်မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုသိသောအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်သာအကြံပြုပါသည်။ မှားယွင်းသောအဆင့်တိုင်းသည် disk ပေါ်ရှိဒေတာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဒီအချက်ကိုမစွန့်စားချင်ရင်၊ မလုပ်ပါနဲ့။ သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်ချင်ရင် option ကိုရွေးပါ အခန်းကန့်အစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု။ Anaconda က "စံပြ" အခန်းကန့်အစီအစဉ်ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကိုရွေးခြင်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည် အကူအညီမလိုအပ်ပါဘူး၊ disk အခန်းကန့်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါ.
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်မှာ disk ကို partitions သုံးပိုင်းခွဲရန်ဖြစ်သည်။
1.- အပိုင်း အမြစ်။ system ကို install လုပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ။ သင်၎င်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုသည်။ ငါ EXT4 ဖိုင်အမျိုးအစားကိုအကြံပြုပါသည်။ အနည်းဆုံးအရွယ်အစားသည်အနည်းဆုံး (၅) gigs (အခြေခံစနစ်အတွက် 5gb နှင့်သင်နောင်တွင်တပ်ဆင်မည့် application များအတွက်ကျန်) ဖြစ်ရမည်။ ထပ်ပြောချင်တာက၊ ဒီဟာကအနည်းဆုံးအရွယ်အစားမဟုတ်ဘဲအကောင်းဆုံးပုံစံမဟုတ်ဘဲ (၁၀/၁၅ GB ဖြစ်နိုင်သည်) ။
2.- အပိုင်း နေအိမ်။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးဘယ်မှာရောက်မည်နည်း။ သင် / အိမ်ထဲ၌၎င်းကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါ EXT4 ဖိုင်အမျိုးအစားကိုအကြံပြုပါသည်။ အရွယ်အစားသည်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုသက်သက်သာဖြစ်ပြီးသင်မည်မျှအသုံးပြုမည်ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်သည်။
3.- အပိုင်း ကားဟောင်းများလဲလှယ်ရေး။ swap memory အတွက် disk ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသောနေရာ (သင် RAM မရှိတော့သောအခါ system က၎င်းကို "ချဲ့ထွင်ရန်" ဒီ disk နေရာကိုအသုံးပြုသည်) ။ ဤအခန်းကန့်ကိုချန်လှပ်။ မရပါ။ အကြံပြုထားသည့်အရွယ်အစားမှာ - က) 1gb သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော partitions များအတွက် swap သည်သင်၏ RAM memory ထက်နှစ်ဆဖြစ်သင့်သည်။ ခ) 2gb သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော partitions များအတွက် swap သည်အနည်းဆုံး 1gb ဖြစ်ရမည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်၊ ကြီးကြပ်သူတစ် ဦး ၏စကားဝှက်ကိုတောင်းရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ပြီးတာနဲ့ system installation ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
တပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးသောအခါသင်၏ Fedora 18 စနစ်အသစ်ကိုသင်ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အကုန်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်၊ system ကို reboot လုပ်ပြီးစမ်းလို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး / disk / pendrive ကို reboot လုပ်ပါ။
ဒါဆန္ဒရှိသောသူတို့သည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် တရားဝင်တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန် Fedora 18 (ယခုအချိန်တွင်သာအင်္ဂလိပ်) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Fedora 18 အဆင့်ဆင့် installation လမ်းညွှန်
ငါကသင့်မှာ UEFI ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ အဲဒါကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက live USB ကိုဖွင့်လို့မရဘူး။ Legacy ကိုသုံးတယ်။ ပြီးတော့ UEFI ကိုသင် activate လုပ်လိုက်ရင်တော့ဒါကိုမစရတော့ဘဲ Legacy ကနေထွက်သွားရမယ်။ Ubuntu 13.04 လိုပဲ UEFI နဲ့စချင်ပါတယ်
ဂျူလီယန်ဒါဝိဒ် Yepes Carreño ဟုသူကပြောသည်
Ubuntu ထက်အခြားအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏သံသယသည် fedora ပိုကောင်းပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါပြန်လာတဲ့ပရိုတိန်း hope မျှော်လင့်ပါတယ်
Julian David Yepes Carreñoအားစာပြန်ပါ
ဒါက subliminal xD jaaaai xD ဖြစ်ခဲ့သည်
ဂျရုမ်း Navarro ဟုသူကပြောသည်
အသေးအဖွဲအမှားတစ်ခုကိုညွှန်ပြပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘာမှမချန်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်ကငါအရမ်းကောင်းပုံရတယ်၊ တဆင့်ပြီးတဆင့်လိုက်ပုံတွေအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း“ install လုပ်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း” ကိုသာစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ 😛
Jerónimo Navarro အားပြန်ပြောပါ
Linux Mint လိုဂိုကိုခေါင်းစဉ်တွင်နေရာချထားသည်။
Fedora download link သည်သင့်အား Linuxmint သို့ပို့ဆောင်သော logo သည်သာမက
အသံနှင့်ဗွီဒီယို fedora 18 အတွက်ကုဒ်နံပါတ်များထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသည်
Ariel gimenez ဟုသူကပြောသည်
ယခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် lunux ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အချို့သောလက်ကိုင်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်သွားပါသည်။
Ariel Gimenez အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လေ့လာသူပါ၊ အလွန်လေ့လာသူပါ။ ငါ Linux ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သုံးတော့မယ်။ fedora ကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်လား အစဉ်မပြတ်ငါပြတင်းပေါက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ Ubuntu ကိုပထမဆုံးသုံးသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါကအလွယ်ကူဆုံးဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Fedora 18 ဟုသူကပြောသည်
ဟေ့လိုမိတ်ဆွေများ၊ ငါ fedora 18 ကိုတပ်ဆင်ပြီးဗီဒီယိုနှင့်တေးဂီတကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖွင့်နိုင်မည်နည်း မှလွဲ၍ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကုဒ်များတောင်းသော်လည်းသိုလှောင်ဂိုဒေါင်များကိုမတွေ့ပါ။ ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိပဲ Bluetooth ကိုမည်သို့ configure လုပ်နိုင်သနည်း။ နောက်ဆုံး vlc ကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သို့ download လုပ်နိုင်သနည်း။ အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။ ရွှင်လန်း!
Fedora ကို 18
ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် DVD နှစ်ခုကိုကူးယူပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာ torrent မှတစ်ခုနှင့်ပုံမှန် download မှဖြစ်သည်။ ငါ x86_64 ဗားရှင်းကိုသုံးတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်ကောင်းစွာ install နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအပြည့်အစုံ format မလုပ်ခဲ့ရင် (မေ့သွားတယ်) ငါ dvd ဒါမှမဟုတ်တခြား dvd တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး install လုပ်ချင်တယ်၊ ဘာသာစကားရွေးတဲ့အခါမှားသွားတယ်၊ \_ t ဒါကငါ့ကိုဆက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ Linux အကြောင်းသိပ်မသိဘူး၊ ၁၇ နဲ့ငါပျော်ခဲ့တယ်။ ငါအခုဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက် - သင်ကိုယ်တိုင်ပြsaveနာကိုကယ်တင်ပြီး fedora 17 ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ (သို့) အခြား distro တစ်ခုကိုပြောင်းပါ။
ငါ virtualbox ကိုသုံးသည်၊ ငါစက်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုချန်ထားနိုင်မည်၊ ကျွန်ုပ်စတင်တပ်ဆင်သောအခါကျွန်ုပ်၌ပြproblemsနာများရှိနေသည်၊ အမှန်တရားမှာအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Granda ဆာ Co. , $ t ကို ဟုသူကပြောသည်
Sir Co $ t Granda သို့ပြန်ကြားပါ
နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် boot နှင့်သမျှသောကော? F: Fedora ကို install လုပ်ဖို့ "ခက်ခဲ" တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုလုပ်ပါ။ ဆိုလိုတာကသင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပါစို့၊ installer စက်ကရွံစရာကောင်းတယ်၊ အတားအဆီးတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဗဟုသုတနည်းတဲ့သုံးစွဲသူဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ ရှုပ်ထွေးသော်လည်း Fedora ကိုတစ် ဦး တည်းတပ်ဆင်ရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ၊ အမှန်တရားသည်အလွန်ကြီးသော OS တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျပါသည်။ Debian သို့မဟုတ် Ubuntu မှသင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင့်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ယူရသောကောင်းမွန်သောဖြေးဖြေးရောင်တစ်ခုဖြစ်သည် (:
သင် Tor မှဆက်သွယ်သည်မဟုတ်လော 😛
အက်ဒီ Juarez ဟုသူကပြောသည်
ငါ Fedora ကို pendrive တစ်ခုမှတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်၎င်းကိုစတင်သောအခါကျွန်ုပ်သည် Live System User အဖြစ်စတင်ရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ဒီဟာကဘာလဲ ဒီအတွက်မဆိုအဖြေ?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ hard drive ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ချင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဒီ fedora သည် partition ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပိုကြီးအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထည့်သွင်းပြီးပါက Fedora သည်သီးခြား repo တစ်ခုကိုသယ်ဆောင်ပါသလား EPEL သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုသို့မဟုတ် Centos သို့မဟုတ် Redhat repo နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။ ဤသည် repos ကို fedora Epel မှအပအခြားအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Consort: SolusOS အတွက် Desktop Environment အသစ်ကိုမွေးဖွားသည်